Dalxiiska Kuuriyada Koonfureed: Sawirka runta ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Kuuriyada Koonfureed » Dalxiiska Kuuriyada Koonfureed: Sawirka runta ah
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Ammaanka • Wararka Kuuriyada Koonfureed • Hadalka Dalxiiska • Sirta Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Jamhuuriyadda Kuuriya oo loo yaqaanay Kuuriyada Koonfureed waxay ku sii xoogaysanayeen labada dalxiis ee soo gala iyo ka baxsanba intaan la helin faafitaanka COVID-19. 84,000 oo shaqo oo ku saabsan dalxiiska ayaa hadda lumay. Waa maxay xaaladda warshadaha safarka iyo dalxiiska ee Kuuriyada Koonfureed?
Warbixinta Sannadlaha ah ee Saameynta Dhaqaalaha ee Golaha Socdaalka & Dalxiiska (WTTC) (ET) maanta waxay muujineysaa saameynta baaxadda leh ee COVID-19 ku yeelatay waaxda Safarka & Dalxiiska ee Kuuriyada Koonfureed, iyada oo tirtirtay $ 33.3 bilyan oo ka timid dhaqaalaha waddanka.
EIR sanadle ah oo ka socda Golaha Socdaalka & Dalxiiska Adduunka (WTTC), oo matala waaxda gaarka loo leeyahay ee Safarka & Dalxiiska adduunka, ayaa muujineysa tabarucaada waaxda ee GDP ay hoos u dhacday xaddiga 45.5%.
Saamaynta Safarka & Dalxiiska ee waxsoosaarka dalka wuxuu hoos uga dhacay USD $ 73.2 bilyan (4.4%) sanadka 2019, illaa $ 39.9 bilyan (2.4%), kaliya 12 bilood kadib, 2020.
Sannadka xaddidaadda safarka ee keenay in badan oo safarka caalamiga ah hakad ku yimaado, ayaa sababay luminta 84,000 oo shaqo & Dalxiis oo dalka oo dhan ah.
Si kastaba ha noqotee, tiradani, inkasta oo ay waxyeello u geysato kuwa ay dhibaatadu saameysey, aad ayey uga hooseysaa dalal badan oo kale oo caalami ah iyo gobol ahaanba.
WTTC waxay rumeysan tahay in sawirka runta ah uu si aad ah uga sii xumaan lahaa, hadaanay ahayn qorshaha sii-haynta shaqada ee dawladda, Roadmap-ka Caymiska Shaqaalaynta Caalamiga ah, iyo lacagaha kicinta gargaarka degdegga ah, kuwaas oo dhammaantood halbawle u ah kumanaan ganacsato iyo shaqaale ah.
Shaqo la'aantan ayaa laga dareemay guud ahaan nidaamka socdaalka & Dalxiiska ee dalka, SMEs, oo ka kooban siddeed 10 ka mid ah dhammaan ganacsiyada adduunka ee qaybta, gaar ahaan ay saameysay.
Intaa waxaa sii dheer, maaddaama ay tahay mid ka mid ah qaybaha ugu kala duwan adduunka, saameynta ay ku yeesheen haweenka, dhallinyarada iyo dadka laga tirada badan yahay waxay ahayd mid weyn.
Tirada dadka ka shaqeeya waaxda Socdaalka & Dalxiiska Kuuriyada Koofureed waxay hoos uga dhacday ku dhowaad 1.4 milyan sannadka 2019, illaa 1.3 milyan sannadka 2020, hoos u dhac 6.2% ah.
Si kastaba ha noqotee, mar labaad sababo la xiriira qorshaha sii-haynta shaqada ee dowladda, tiradaasi waxay si aad ah uga hooseysaa hoos u dhaca celceliska adduunka ee 18.5%.
Warbixinta ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in qarashyada booqdayaasha gudaha ay hoos udhaceen 34%, halka qarashyada caalamiga ah ay kasii xunyihiin sababo laxiriira xayiraadaha safarka ee adadag, oo hoos udhacay 68%, kaliya waxyar kafiicnaaday celceliska celceliska adduunka ee kudhowaad 70%.
Virginia Messina, Madaxweyne Ku Xigeenka WTTC waxay tiri: “luminta 84,000 shaqooyinka Safarka & Dalxiiska ee Kuuriyada Koonfureed waxay ku yeelatay saameyn dhaqan xumo dhaqaale, taasoo ka dhigeysa dad aad u tiro badan oo ka baqaya mustaqbalkooda.
“Si kastaba ha noqotee, waa inaan ku bogaadinaa Madaxweyne Moon Jae-in dadaalkiisa cajiibka ah. WTTC iyo xubnaheeda waxay kaloo u mahadcelinayaan Wasiirka Dhaqanka, Isboortiga iyo Dalxiiska Hwang Hee sida ay ugu heellan tahay ganacsiga gaarka loo leeyahay dadaalkiisa ku aadan badbaadinta Safarka & Dalxiiska.
Jawaabtii dowladda ee ku aaddanaa COVID-19 waxay ahayd mid aad u wanaagsan, iyadoo maareynaysa dhibaatada iyadoo loo marayo hirgelinta geeddi-socod adag, siyaasado adag, iyo borotokoollo.
”Ku dhisida khibradeeda ku aadan maaraynta cudurka neefsashada ee Bariga Dhexe (MERS), Kuuriyada Koofureed waxay awood u yeelatay inay si dhakhso leh u fidiso qalooca faafa, iyadoon la xirin ganacsiyada, soo saarista joogitaanka amarrada guriga, ama la fuliyo qaar badan oo ka mid ah tallaabooyinka adag ee ay qaateen dalalka kale illaa dhammaadka 2020 .
“Intaas waxaa sii dheer, waxay u sameysay tilmaamo cad shacabka, sameynta baaritaan dhameystiran iyo raadinta xiriir, iyo taageerida dadka karantiil ku jira si ay u fududaato u hogaansanaanta. Fududeynta xeerarka karantiil ee socdaalka la tallaalay ayaa runtii ah tallaabo loo qaaday jihada saxda ah.
“WTTC waxay rumeysan tahay in haddii xaddidaadda socdaalka la dabciyo ka hor xilliga fasaxa mashquulka ah, oo ay weheliso khariidad cad oo loogu talagalay dhaqdhaqaaqa kordhaya iyo tijaabooyin dhammaystiran oo ku saabsan qorshaha bixitaanka ee meesha, shaqooyinka 84,000 ee ka lumay Kuuriyada Koonfureed ayaa soo laaban kara dhammaadka sanadkan.
Daraasadda WTTC waxay muujineysaa in haddii dhaqdhaqaaqa iyo safarka caalamiga ah ay dib u bilowdaan bisha Juun, tabarucaada waaxda ee GDP-da adduunka ayaa aad kor ugu kici kara 2021, 48.5%, sanadkiiba sanadka.
Hay'adda dalxiiska adduunka waxay rumeysan tahay in furaha furitaanka safarka caalamiga ah ee nabdoon lagu gaari karo hannaan cad oo ku saleysan sayniska oo ay ku jiraan tijaabooyin deg deg ah ka hor bixitaanka, iyo sidoo kale borotokoollada caafimaadka iyo nadaafadda ee kor loo qaaday, oo ay ku jiraan maaskarada khasabka ah, oo ay weheliso soo saaridda tallaalka
Tallaabooyinkan ayaa aasaas u noqon doona dhisidda dib u soo kabashada malaayiin badan oo shaqooyin ah oo ku lumay cudurkii faafa.
Waxay sidoo kale yareyn doontaa saameynta xun ee bulshada ee khasaarahan ay ku yeesheen bulshooyinka ku tiirsan Safarka & Dalxiiska iyo dadka caadiga ah ee lagu go'doomiyay xayiraadaha COVID-19.